Mayelana NATHI - Imishini ye-Shenzhen Simida Intelligent Co, Ltd.
Ikhaya > Mayelana NATHI > Mayelana NATHI
Yasungulwa ngonyaka ka-2008, iSmida iyinkampani yezobuchwepheshe ephezulu ehlanganisa ukubonisana ngezixazululo nge-automation solution R&D, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nezinsizakalo zangemva kokuthengisa. USmida unikezwe isitifiketi sokubhalisa uphawu lwentengiso ngesiShayina nesiNgisi futhi unemvume yokuthekelisa nokuthekelisa ngaphandle ngokuzimela.
Amalungu eqembu lethu eliyisisekelo onke aneminyaka engaphezu kweshumi yokuhlangenwe nakho kwemboni. Umsebenzi wethu ukuba ngumkhiqizi omuhle kakhulu wemishini ngokubambelela emgomeni wokuqamba ngokuqamba kanye nowokukhiqiza ngokunembeza, futhi nokwakha inani lamakhasimende ethu ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu nezinsizakalo ezenzelwe umsebenzi osuselwa kubambiswano lokuwina. Ngayo yonke imizamo yethu, sifuna ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngezinsizakalo eziqhubekayo.
Okwamanje, sibamba ikhwalithi yomkhiqizo njengenani lethu lomongo. Sikholwa ukuthi amabhizinisi amakhulu ezokukhiqiza azobusa umkhakha wezokukhiqiza ngokuzayo nokuthi amabhizinisi anjalo azokhuphukela ekusebenziseni ezenzakalelayo ukufeza izidingo zawo zokukhiqiza. Lapho amabhizinisi amaningi ngokwengeziwe esebenzisa imishini, ukuqina kwemishini kuzobaluleka kakhulu. KwaSmida, sikuthatha njengomsebenzi wethu ukuklama imishini ngokuqina okuphezulu nokusebenza okulula ukuze uhlangabezane nezidingo zabakhiqizi abahle.
Njengoba imishini yethu isivivinyiwe, yathengwa ngamanani amavolumu, futhi isetshenziswa ngamabhizinisi amakhulu ahlukahlukene isikhathi eside, siyaqiniseka ukuthi ingahlangabezana nezidingo zakho zemishini yekhwalithi. Ngakho-ke, khetha us, futhi uzothola ubungcweti nokuthula kwengqondo! Silindele ukuzwa kuwe -
Ikheli: 12 / F, Sakhiwo B, Quanju Industrial Park, Gongming General Shipinggang, District Guangming, Shenzhen City, Provincia waseGuangdong, China
I-copyright @ 2019-2021 Shenzhen Simida Intelligent Equipment Co, Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.